किन जाँदैछिन् मोडेल तिर्सना यूके ? | Indrenionline.com
Home मनोरञ्जन किन जाँदैछिन् मोडेल तिर्सना यूके ?
किन जाँदैछिन् मोडेल तिर्सना यूके ?
२०७३ जेष्ठ २७ गते बिहीबार १६:०७ बजे
काठमाडौ – ग्लोबल मिडिया पावरको प्रश्तुतीमा निर्माण हुन लागेको डुकु ड्रामाको अभिनयको लागि नायिका तथा मोडल तिर्सना बुढाथोकी युके जाने तयारीमा छिन बिशेषतः युके, अमेरिका, कोरिया लगायतका बिकशित देशहरुमा सुरक्षित भबिश्यको खोजीमा बिदेसिएका नेपालीहरुले त्यहाँ पाएको दुःख र जिबनका हैरानी हरुलाई समेटेर बनाउन लागिएको उक्त डोकुमेन्ट्रीले बैदेशिक जिबनको सम्पुर्ण पाटोलाई प्रश्तुत गर्ने निर्माण पक्षको दाबि छ ।
नायिका तिर्सनाको मुख्य भुमिका रहने उक्त डोकुमेन्ट्री युकेका बिभिन्न शहरमा छायांकन सम्पन्न गरिने र यसले सबै नेपालीको मन छुनेमा आफु ढुक्क रहेको उनले बताईन । यद्यपी कार्यव्यस्ताताको कारण समय मिलाउन अप्ठेरो परिरहेको उनको भनाइ थियो ।
पछिल्लो समय लोक म्युजिक भिडियोहरुमा ब्यस्त बन्दै गइरहेकी तिर्सनाको म्युजिक भिडियोहरुमा उच्च माग छ । हालसम्म ३ वटा फिल्म र ६० भन्दा बढि म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेकी नायिका तथा मोडल बुढाथोकी आफुलाई हट नायिकाको रुपमा प्रश्तुत गर्छिन् ।
बिभिन्न किसिमका स्क्याण्डल मार्फत चर्चामा आइरहने तिर्सनाको हटफोटोसुटका साथै युट्युवमा पनि सर्वाधिक खोजी गरिने नायिका तथा मोडलहरुको सुचीमा तेस्रो नम्बरमा रहेकी छन् ।
Previous articleवन्यजन्तु चोरी सिकारी गर्ने बढे
Next article६५ प्रतिशत पुँजीगत वजेट खर्च